Tregenna Apt 1: Central St Ives Sea Views Views Parking* - I-Airbnb
Tregenna Apt 1: Central St Ives Sea Views Views Parking*
Indlu entle esembindini weSt Ives, eneSea View and Parking (Jonga inqaku * ngezantsi).
Indawo entle ebonelela ngendawo yokuhlala etofo-tofo yokuzenzela iholide.
Ukuqhayisa iimbono zolwandle kuyo yonke idolophu kunye nezibuko, nantsi indawo egqibeleleyo yonxweme. Ilungele izibini okanye izihlobo ezijonge ukonwabela iilwandle, iivenkile, iigalari kunye neendawo zokutyela eSt Ives. Phuma kumnyango wangaphambili kwaye ujonge idolophu, iilwandle kunye namawa akumnyango wakho okanye ubukele nje umhlaba udlula.
Le ndlu ibekwe kumgangatho ophantsi, ifikeleleka ngokungena kwindawo yokuhlala kwaye inomnyango wayo wangaphambili.
Ineplani evulekileyo yokuphumla / isidlo sangokuhlwa kunye nekhitshi enefestile ephindwe kabini yesash phambi kwendlu inika izibuko kunye nolwandle kunye nesiqithi. Ihonjiswe kwisitayela sangoku ukuya kwinqanaba eliphezulu kakhulu.
Ikhitshi-ebandakanya ifriji (enegumbi lomkhenkce), i-oveni, isitovu sokungenisa iiringi ezimbini, ihood yokutsalwa, iwasha-dishwasher encinci kunye newasha-somisi-ixhotyiselwe ngokupheleleyo ukuhlala kwakho. Kukwakho ne-ayina/ibhodi yoku-ayina kunye ne-airer yempahla elungiselelwe ukusetyenziswa kwakho.
I-Smart TV kunye ne-Wi-Fi ekhawulezayo ibonelelwe.
Igumbi lokulala lifikeleleka ukusuka kwigumbi lokuphumla / isidlo sangokuhlwa kwaye linebhedi elingana nenkosi, indawo yewodrophu kunye nesifuba sedrowa kwaye inika ukufikelela kwi-en-suite eneshawari enkulu yokuhamba ngemvula, isitya sokuhlambela izandla kunye nendlu yangasese.
Zonke iingubo zelinen kunye neetawuli zikhona.
Le ndlu ifudunyezwa kwindawo esembindini ngamanzi ashushu aneleyo.
*UKUPAKA imoto enye kuyafumaneka kwindawo yethu yokupaka ejongene ngqo nendlu. Indawo ilinganiselwe ngokobukhulu kwaye ayinakulungela iimoto ezinde/ezinkulu. Ubude obuninzi buyi-4.4m. Ukuba uyathandabuza nceda usithumelele umyalezo phambi kokuba ubhukishe.
Kungenjalo, kukho iintlawulo zikawonke-wonke ezininzi kunye nokubonisa iipaki zeemoto ukusuka kumgama nje oyi-300m.
Indawo yokulala ilungiselelwe abantu aba-2.
4.99 · Izimvo eziyi-102
Injongo yethu kukukunika ukwamkeleka okukhulu kunye nokuhlala kamnandi. Siza kudibana nawe ekufikeni ukuze siqinisekise ukuba uzinzile kwaye uya kufumaneka, ukuba uyasifuna, ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.